२६ कात्तिक, काठमाडौं । मन्त्रीहरुको आधा तलब काटिएपछि के खाने ? केले पाहुना पाल्ने ? कुरा त उठ्थ्यो होला । तर, कसैले मुख फोर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले उपाय पनि बताइदिएपछि अस्ति सोमबार साँझ ६ देखि ९ बजेसम्मको क्याबिनेट बैठकमा सबै चुपचाप रहे ।
‘दुनियाँमा सबैभन्दा थोरै तलब भएका सांसद र मन्त्री नेपालकै हुन् तर अहिले कोरोनाको संक्रमणले देशलाई नराम्रोसँग गाँजेका कारण हामीले आधा तलब काट्नुपर्ने अवस्था छ…!’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसो भन्दा बैठकमा कोही बोलेनन् । बरु, उनले नै प्रष्ट पारे, ‘अब खर्च व्यवस्थापनको लागि घरबाटै चामल मगाएर खाने ।’ यसो भनेपछि गृह र अर्थबाहेक केही मन्त्री झसंग भए ।
मन्त्रीका दुःख कति भने, एकातिर पार्टीको लेबी, अर्कातिर आधा तलब कोभिड कोषमा गएपछि हातमा मुस्किलले हात्ती भएको पाँच थान नोट पनि नपर्ने । त्यसमाथि महंगी अचाक्ली । ठूला पर्वको समय, निर्वाचन क्षेत्र, कार्यकर्ता, मतदाताबीच जानु छ, त्यहाँ पनि हुने खर्च नै हो । तर, आधा पैसा कोभिड कोषमा गएपछि लप्पन–छप्पन नजान्ने र खासै स्रोत नभएका मन्त्री र सांसदलाई भने मार परेको छ ।
प्रधानमन्त्री आफैँले चैतदेखि मासिक तलब नबुझेको भन्ने गरेका छन् । तर, विदेशका महंगा अस्पतालमा हुने उपचार खर्चको जोहो कसरी भइरहेको छ ? व्यक्तिगत खर्च कसरी चल्छ ? कसैकसैले हँस्यौली गर्दै भन्ने गरेका छन्, ‘पत्नी राधिकाको राष्ट्र बैंकबाट आउने महिनावारी पेन्सनबाट त चल्ने होला नि !’
अर्कातिर, यसअघि सरकारले बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन मल पैँचो मागेको विषय पनि अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ । पैँचोमा मल नआउने भएपछि सरकारले त्यहीँबाट सोही परिमाणको मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन ढाकास्थित नेपाली दूतावासलाई अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ । यो खबर आजको जनआस्था साप्ताहिकमा छ ।
सिटिजन्स बैंकको १ सय ११औं शाखा दाङको तुलसीपुरमा
आज देशभरका यी नदीमा बाढीको जोखिम (सूचीसहित)
कोभिडसँग सम्बन्धित निःशुल्क परामर्श अब मिदासको ‘मेरो डाक्टर’ एप मार्फत